जापानमा नेपालीहरूकेा स्वास्थ्य बिमा कति ? - समायोजन खबर
जापानमा नेपालीहरूकेा स्वास्थ्य बिमा कति ?
जापान जापानमा बस्ने हरेक नेपालीहरूले स्वास्थ्य बीमा अनिबार्य गर्नुपर्ने नियम छ । स्वास्थ्य बीमा गरेमा बिरामी पर्दा लागेकेा जम्मा खर्चकेा ३०प्रतिशत मात्र तिर्नु पर्दछ । बाकी ७० प्रतिशत जापान सरकारले नै बेहेार्ने गर्दछ ।
येा पर्यटन भिषामा जापान पर्यटन भिषामा अाउने बाहेक सबैले गर्नै पर्ने हुन्छ । सुरूवातका बर्षहरूमा १०००देखि १२००येन लाग्छ तर देास्रेा बर्षबाट अाफुले गरेकेा काम अनुसार पहिलेा बर्ष तिरेकेा भन्दा बढी अाउछ । नियमित स्वास्थ्य बीमाहरू तिरेमा उपचार गर्ददा र अैाषधी किन्दा लाग्ने खर्चमा समेत छुट पाउछ । अन्यथा हाम्राे अाम्दानीले जापान मा उपचार खर्च पुर्याउन धैाधैा पर्दछ ।
बाहेक सबै प्रकारका रेाग लागेमा बिमा बापत उपचार मा छुट पाउछ । जापानबासी नेपालीहरू स्वास्थ्य बिमा गर्न गाह्रेा मान्ने गरेकेा पाइन्छ । बिमा नगरेमा यहा सामान्य उपचार गर्दा पनि १०,१५हजार खर्च लाग्ने गर्दछ ।
ठुलेा दुर्घटनातथा रेाग लागेमा लाखैा खर्च हुन्छ जुन हामी नेपालीहरूका लागि असम्भव देखिन्छ । जापानमा रहेका रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा जादा अनिबार्य बिमा कार्ड लिएर जानुपर्दछ । सामान्य रेागपनि गम्भीरता पुर्बक उपचार गरी बिरामीलाइ प्रत्यक्ष निगारानीमा राख्ने हुँदा स्वास्थ्य करर्मीहरूलले दिएकेा सल्लाह अनि सुझावलाइ महत्वपुर्ण मानिन्छ। एकै पटक अैाषधी उपचारनगरिने भएकेा हुदा तेाकेकेा मिति र समयमा हस्पिटल पुग्नु पर्ने हुन्छ ।
जापानमा अाफु बसेकेा वडा कार्यलयकेा बिभागमा गइ गेन्देा गाकु तेकियेाउ निन्तेइ स्येा लिएमा उपचारमा धेरै छुट पाउछ । त्यस्तै राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा नियमित गरेमा जापान बाहेक देशमा गएर बालबच्चा जन्माएपनि प्रसुति खर्च पाउछ । तर बच्चा जन्मेकेा २ महिना भित्र सेा सुबिधा लिइसक्नुपर्दछ ।
अाफु कार्यरत कम्पनीमा स्टाफकेा रूपमा साताकेा ५ दिन काम गरेमा कम्पनीले स्याखाइ हेाकेनकेा समेत सुबिधा दिएकेा हुन्छ । स्याखाइ हेाकेन गरेमा अाफ्नेा परिबार जापान घुम्न अाउदा बिरामी परेमा प्रयेाग गर्न सकिन्छ । यि बाहेक अन्य बिबिध किसिमका बिमा हरूपनि रहेका छन् जापान महँगेा शहरकेा रूपमा मानिन्छ हामी दिन रात दुख परिश्रम गर्छैा तर बिमा गर्न कन्जुस्याइ गर्छैा ।जापानले यति धेरै सुबिधा दिएकेा छ । यसलाइ सही सदुपयेाग गर्न सिकैा ।